Ndị na -emepụta ọgwụ na ndị na -emepụta ọgwụ - China Pharmaceutical Equipment Factory
Igwe eji asacha mmiri sirop na -agụnye ikuku mmiri sirop /ịsa ultrasonic, ndochi sirop akọrọ ma ọ bụ ndochi sirop mmiri na igwe mkpuchi. Ọ bụ imekọ ihe ọnụ, otu igwe nwere ike ịsacha, jupụta na ịghasa karama n'otu igwe, belata ego itinye ego na imepụta ya. Igwe ahụ niile nwere usoro pere mpe, obere ebe mmadụ bi, yana onye ọrụ pere mpe. Anyị nwere ike iji igwe na -enye karama na akara akara maka ahịrị zuru oke.
Ahịrị mmepụta mmiri mmiri Vial gụnyere igwe ịsa ahụ ultrasonic kwụ ọtọ, igwe na -ehicha mmiri RSM, igwe ndochi na nkwụsị, igwe mkpuchi KFG/FG. Usoro a nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ yana n'adabereghị. Ọ nwere ike mezue ọrụ ndị a nke ịsa ultrasonic, ihicha & sterilizing, ndochi & nkwụsị, na mkpuchi.
Sirinji emejuola bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa ọgwụ ọhụrụ mepụtara na 1990s. Mgbe ihe karịrị afọ iri atọ nke mgbasa ozi na iji ya eme ihe, ọ rụọla ọrụ dị mma n'ịgbasa mgbasa nke ọrịa na -efe efe na mmepe ọgwụgwọ. A na-ejikarị sirinji emejuru emeju maka ịkwakọba na ịchekwa ọgwụ dị elu ma a na-ejikwa ya ozugbo maka ntụtụ ma ọ bụ ịwa ahụ anya, otology, orthopedics, wdg.
Usoro mmepụta Dialysis Ngwọta Peritoneal anyị, yana usoro kọmpat, na -enwe obere oghere. Enwere ike idozi data dị iche iche wee chekwaa maka ịgbado ọkụ, ibi akwụkwọ, ndochi, CIP & SIP dị ka ọnọdụ okpomọkụ, oge, nrụgide, nwekwara ike bipụta ya ka achọrọ. Nnukwu draịva jikọtara ya na servo moto yana eriri eriri, ọnọdụ ziri ezi. Igwe ihe omimi dị elu na-enye ndochi zuru oke, enwere ike idozi olu ya n'ụzọ dị mfe site na igwe igwe.
Ngwa anyị na-ahụ na arụ ọrụ enweghị nsogbu, yana ọnụ ahịa mmezi yana ntụkwasị obi ogologo oge.
Ahịrị akpa rọba na-abụghị PVC bụ ahịrị nrụpụta kachasị ọhụrụ na teknụzụ kachasị elu. Ọ nwere ike mechaa inye nri ihe nkiri, ibi akwụkwọ, ịme akpa, ndochi na akara n'otu igwe. Ọ nwere ike ịnye gị ụdị akpa dị iche iche na otu ụdị ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri otu/okpukpu abụọ, ọdụ ụgbọ mmiri dị nro okpukpu abụọ wdg.
Usoro usoro mmịpụta ahịhịa nke osisi gụnyere sistemụ static/ike mmịpụta, akụrụngwa nzacha, mgbapụta na -ekesa, mgbapụta na -arụ ọrụ, ikpo okwu na -arụ ọrụ, tankị nchekwa mmiri, ọkpọkọ ọkpọkọ na valves, sistemụ ịchekwa oghere, tankị nchekwa mmiri, mmanya na -egbu mmanya, mmanya ụlọ elu mgbake, usoro nhazi, usoro ihicha.
Igwe eji emejuola agịga, Igwe Ampoule À Coudre Led, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara,